जिगर सकिन्छ मानव शरीर को सबै भन्दा संवेदनशील अंगहरु मध्ये एक - त्यो कारक, तनाव र शारीरिक तनाव, गरीब आहार वा खराब बानी सहित एक विशाल संख्या भोगिरहेका छ बस मुख्य कारण हो। तसर्थ, यो व्यवहार गर्न, कलेजो, यसको सामान्य कामकाज, वा, चरम अवस्थामा को बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण छ। निस्सन्देह, उचित उपचार, डाक्टर को अध्ययन र निदान पछि गरिन आफ्नो निर्देशन र पर्यवेक्षण अन्तर्गत आवश्यक छ, तर यो कलेजो लोक उपचार उपचार गर्न सम्भव छ - परम्परागत चिकित्सा संयोजनमा।
उत्कृष्ट स्वागत विधि मह (500 G।) बाट सिर्जना "दबाइ", तेल (500 एमएल।), लेमन जुस एक प्रकारको (50 एमएल।) अनि स्याउ सिरका (100 एमएल) छ। यो उपकरणको लागि सबै सामाग्री, तपाईं राम्ररी मिश्रण र यसलाई फ्रिज खडा पठाउनु पर्छ। केही दिन पछि, मिश्रण राम्ररी प्राप्त गर्न सक्छन् मिश्रण - मात्र काठको चम्चा - र एक चमचा लागि एक दिन तीन पटक भोजन अघि आधा घण्टा लिन। यस्तो उपचार कलेजो परम्परागत विधिहरू, विभिन्न रोगहरु मा दुखाइ आक्रमण राहत गर्न आन्तरिक अङ्गहरू सफा र तीव्र निको प्रचार गर्न मद्दत गर्छ। राहत 4-5 दिन को बस एक कुरा आउँछ, तर एक स्वादिष्ट स्वागत दबाइ फेंक हुँदैन - यो तीव्र को अवधि मा उपयोगी हुनेछ कलेजो रोग, लेट शरद ऋतु र प्रारम्भिक वसन्त मा अर्थात्।
पनि विभिन्न रोगहरु विरुद्ध लड्न एक परिणाम हो कलेजो रोग को, निम्न हालतमा मद्दत गर्छ: मह (500 एमएल) जमीन दालचिनी को वाहेक संग एक औषधिको खुराक मा कुन राम्ररी मिश्रित छ र अघि वा एक दिन चार पटक गर्न भोजन पछि प्रयोग गरिन्छ, (। 40 G) कम्तिमा दुई चमचा। यस्तै रोग संग सामना गर्दै छन् गर्नेहरूलाई द्वारा उल्लेख, पीडा केही दिन पछि गायब।
को कलेजो उपचार यसलाई बारम्बार परीक्षण गरिएको छ रूपमा, डाक्टर नियुक्त र, केही अवस्थामा लोक उपचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण, छैन शरीर थप हानि गर्न सक्षम छ। यस सन्दर्भमा, यो मकै गर्न उपयोगी छ - यसको बीउ एक साधारण चिया जस्तै, पानी उम्लिरहेको मा पीसा गर्न आवश्यक र हरेक दिन एक गिलास पिउने। यो विधि पीडा र रोग नै छिटो छुटकारा ग्यारेन्टी छैन, तर उपचार को छ महिना पाठ्यक्रम शाब्दिक मदत रिकभरी मात्र होइन कलेजो, तर पनि सारा जीव विचित्रताहरू काम गर्दछ - यसको अंगहरु र प्रणाली - एक पुरा को रूप।
कलेजो र अंग रोगहरु गर्न विभिन्न सम्बन्धित को रोकथाम को उपयोगी लोकप्रिय उपचार र यस्तो marrows रूपमा केही खाद्य पदार्थ, को नियमित सेवन हुन सक्छ। यी तरकारी आन्तरिक अङ्गहरू एक उल्लेखनीय प्रभाव, योगदान छ जिगर सफाई र bile को ठहराव रोक्न। सामान्य मा Courgettes उपयोगी सुविधाहरू धेरै छ, र सबै भन्दा यी महत्त्वपूर्ण यी तरकारी कुनै पनि रूप मा इन्जेशन द्वारा शरीर rejuvenate मदत भन्ने तथ्यलाई छ - कच्चा र धमाकेदार र, र सलाद को भाग हो। साथै, zucchini पकाएको सकिन्छ धेरै स्वादिष्ट र धेरै स्वस्थ पकवान - टुकडे करो यो ठीक "julienne", एक सलाद कचौरा मा कटा ककडी, उसिनेर अन्डा को स्लाइस, टमाटर को स्लाइस र सूक्ष्मता कटा साग साथ खन्याउन। तालिका स्वागत - इन्धन भर्ने, खट्टे क्रीम सलाद पछि!
कलेजो उपचार लोक उपचार अक्सर शरीर मा पत्थर को गठन विरुद्ध लड्न निर्देशित। यो अद्भुत नुस्खा योगदान: (। 300 G) सन बीउ, एक मासु Grinder मार्फत पारित हुनुपर्छ दूध संग कवर (900 एमएल।) अनि प्लेट मा राखे। पदार्थ तल उसिनेर र मात्रा मा आधा द्वारा कम छ, यो त प्रत्येक भोजन एक गिलास अघि प्रयोग गर्न खुसीले गदगद, नाली र अलिकति शांत गर्न आवश्यक हुनेछ। उपचार को पाठ्यक्रम विरामीहरु को विशाल बहुमत महत्वपूर्ण राहत महसुस जो पछि पाँच दिन, छ। यो कलेजो लोक उपचार को उपचार एक panacea छैन र आवश्यक आफ्नो डाक्टर निर्धारित लागूऔषधको सेवन सँगसँगै हुनुपर्छ भनेर सम्झना मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
को erythrocyte अवसादन दर के गर्छ?
Endoscopic polypectomy: प्रक्रिया को विशेषताहरु
हतार मा द्रुत सलाद: शीर्ष7सर्वश्रेष्ठ व्यञ्जनहरु
रूसी sniper राइफल्स - शुद्धता युद्ध अङ्कित
कसरी भोज पछि सगंधित को गन्ध हटाउन